~ ဏီလင်းညို ~: အမြဲစိမ်းတော...
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 7:30 PM
ကိုဏီလင်းညိုရဲ့ ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အကို့မေမေ ပြောတဲ့စကားလေးဟာ အရမ်းမှန်တယ်နော်။ ပိုက်ဆံတွေကို မုန်းတယ်တဲ့ ဒီပိုက်ဆံတွေကြောင့် အခုလိုခွဲနေရတာတဲ့။ မှန်လိုက်တာ အကိုရယ်။
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး အိမ်က မိဘတွေကို အရမ်းသတိရသွားတယ်။ မေမေလည်း ဒီလိုစကားမျိုးပြောဘူးတယ်။ သမီးရယ်တဲ့ မေမေတို့မသေခင်တော့ မိသားစုတွေ တူတူနေသွားချင်တယ်တဲ့။ တကယ် မျက်ရည်ကျမိပါတယ်။
မတတ်သာတဲ့ ဘ၀မှ မိဘတွေကို လုပ်ကျွေးချင်တာရယ် ကိုယ့်ဘ၀ တိုးတက်ချင်တာရယ်ကြောင့် အခုလို ရေမြေခြားနေကြရပေမယ့် ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ မိသားစုကိုတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လွမ်းနေရတာပါ။
အကို့ရဲ့ မေမေ ၅၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ ချစ်သောမိသားစုနှင့် အတူတကွ နေနိုင်ပါစေနော်။
သေချာတယ်အစ်ကိုရေ ခံစားရတယ် ငွေလာရှာနေရပေမယ့် မလွယ်ပါဖူးဗျာ
ကျွန်တော်လဲ မလေးရောက်နေတာ ၇ နှစ် ရှိပြီ ဒီနှစ်ကုန်ရင် အမေ့အိမ်ကို
မိဘတွေသက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်...
သြော် တကယ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ... ပြန်နိုင်တဲ့ အနေအထားဆိုရင် မိဘနားမှာ နေပေးတာ ကောင်းတာပေါ့ .. နော ..ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း လူတိုင်းက သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ချည့်မို့လား .. ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေ ...
ကိုဏီလင်းညိုရဲ့ မေမေ ၅၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှစပြီး
ကျန်းမာချမ်းသာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်.........
အမေကို ချစ်တဲ့ ကိုဏီလင်းညို တစ်ယောက်လဲ ချစ်သောမိခင်ကို
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၂ မျိုးလံးနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း
ဟုတ်ပါတယ် အမေ့အိမ်ဆိုတာ တကယ့် အမြဲစိမ်းတောပါပဲ...
ဘယ်လို အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ဘယ်လို အခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
အင်း... အစ်ကို့ကို အစ်ကို့အမေက ဘယ်လောက်များလွမ်းနေလိမ့်မလဲ နော်... ဒီလို ဆုံလိုက်ကွဲလိုက်ဆိုတာ ဘ၀ပဲလား......
အဝေးရောက်သားတွေ အလွမ်းတွေ တာမရှည်ပါစေနဲ့ရယ်လို့
ရေးသားချက်က ကောင်းလွန်းတယ် ကိုဏီလင်းရေ ခံစားလိုက်ရတဲ့ မေတ္တာ တရားလေးပါပဲ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့လို အဝေးရောက်သူတွေ အတွက် မိဘ မေတ္တာ အရိပ်လေးက အရမ်းအေးမြ နေဆဲပါပဲ
ဖတ်နေရင်းနဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့တဖက်တချက်မှာတောင် မျက်ရည်တွေဝှေ့သီရတယ်...
မိဘမေတ္တာဆိုတာ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရတာ အမှန်ပါ...
အိမ်ပြန်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေကို အမြဲမျှော်လင့်နေကြတဲ့ အိမ်းဝေးသူအားလုံးနဲ့
ကိုဏီလင်းညိုရဲ့ စိတ်ကူးတွေ မမြန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေဗျာ...
ကျနော်လဲ မေမေ့ကို ချစ်တယ်.... ကျနော့်မွေးနေ့မှာ သူ ဖုန်းဆက်လာတယ်.... သူမေ့နေပြီထင်တာ.... လွမ်းလိုက်တာ....သား အမိတွေ တွေ့ရမယ့် အချိန်တွေ ဟာ နဲသထက်နဲလာကြတယ် ဆိုတော့ .... စဉ်းစားတိုင်းဝမ်းနည်းတယ်.... မေမေနဲ့ဖေဖေကို ကိုယ်ထက်ပြန်ငယ်စေချင်လိုက်တာ.... ကျန်းမာေ၇းကောင်းအောင်လဲ ဂရုစိုက်ပေးဘို့မလွယ်.... ကိုယ်ကအဝေးမှာလေ...
မေမေ့အတွက် မွေးနေ့ပို့စ်လေးကို လာဖတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူး...တစ်ကယ်ပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
မေမေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြတာကိုလည်း ဖော်မပြတတ်အောင်ဝမ်းသာရပါတယ်...။ အိမ်လွမ်းတဲ့ ဝေဒနာလေးတွေလည်း ကင်းကြပါစေဗျ...။ (ကိုယ့်အတွက်ပါ..ထည့်ဆုတောင်းပါ၏...။)
ကို ဏီလင်းညိုရဲ့မေမေ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေဗျာ.. အား..................................................ကျွန်တော် လည်းအဲလို အော်ဟစ်ပြီးငိုလိုက်ချင်တယ်..
ခုမှရောက်ဖြစ်တာ ဆောရီးပါ အကိုရေ...
အမြဲစိမ်းတောလေး ထာဝရစိမ်းစို လန်းဆန်းနေပါစေဗျာ။
အကို့အမေ သက်ရှည်ကျန်းမာလို့ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပါစေဗျာ။
“ဒီတစ်ခေါက်...သွားရင်ရော...ဘယ်လောက်တောင်ကြာအောင် နေဦးမှာလည်းကွယ်.....သားငယ်လေးရယ်” ဆိုတဲ့နေရာ အရောက်မှာ မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။ ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ ရင်ထဲလှိုက်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အမြဲစိမ်းတောကိုလည်း လွမ်းသွားမိပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ကျနော့်အဖေ့မွေးနေ့နားနီးနေတဲ့ အချိန်ရယ် ၊ အိမ်ကို လွမ်းနေတဲ့ အချိန်ရယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတော့ ရင်ထဲတော်တော်ရောက်တယ်....
တစ်ခု ကံကောင်းတာက ကျနော်က ပြန်ချင်တဲ့အချိန် ထပြန်လို့ ရတယ်ဗျ....
ကိုဏီလင်းညိုတစ်ယောက် ချစ်သော အမြဲစိမ်းတောကြီးထဲမှာ စိတ်ရှိသလောက် ပျော်ပျော်ကြီး နေနိုင်ပါစေဗျာ....
ညီရေ အမေဆိုတာ ဘာနဲမှ နှိုင်းမရ၊ အစားထိုးမရနိုင်တာမို့လို့ အမေရှိနေသေးတဲ့ ညီအတွက် မဟာကံကောင်းမှုကြီးပဲကွာ။ ညီမေမေ သားလိမ္မာလေးအတွက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေဗျာ။
Mother isaone and only living god.......
မှန်ပါတယ် ကိုဏီလင်းညို....အမေ့အိမ်ဟာ သားသမီးတွေအတွက် အမြဲစိမ်းတောပါပဲ.........
အမေ့ကို သတိရလိုက်တာ ... ဖတ်စရာတွေ အများကြီးပဲ .. အရေးကောင်းတယ် .. ဖတ်လိုက်ဦးမယ်
ငိုချင်သွားဘီ ...း((
အကို့ရဲ အမြဲစိမ်းတောလေး အမြဲ စိမ်းလန်းပါစေ
အမေ့ရင်ခွင်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်နိုင်ပါစေ
စိတ်ကူး ဆန္ဒတွေ အမြန် ပြည့်ဝပါစေ ..
ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျလို့ Myanmar Blogs Digest Page လေးအတွက် ယူသွားတယ်နော်. ကျေးဇူး ဘရို.
Sanda Lynn Shein said...
ကိုဏီလင်းညိုရဲ့ စာကိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် ဂါရ၀ပြုလိုက်ပါတယ်. ကျွန်မကလောလောဆယ် ချပီးသားဆုံးဖြတ်ချက်အောက်မှာ မလွန့်မလူးသာဘဲ တွေဝေနေတဲ့ အမေတစ်ဖြစ်လဲသမီးတစ်ယောက်ပါ.။ အိမ်နဲ့အဝေးမှာ ငွေရှာရင်း အိမ်ကိုခဏပြန်ရောက်တဲ့အခိုက် ကျွန်မသားငယ်လေးကို ထိန်းကျောင်းပေးရင်း ညဘက်တွေမှာ အထီးကျန်နေတဲ့ မေမေ့ကိုကြည့်ပီး ငါအိမ်ပြန်မှ ဖြစ်မယ်လို့ တွေးပီး ပြန်ဖို့လဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ခဲ့တယ် (သားကိုမခွဲချင်တော့တာလဲ ပါတာပေါ့လေ). လုပ်ငန်းခွင်ထဲပြန်ရောက်လို့ အလုပ်လဲထွက်စာတင်ပီးပါပီ.အဲဒီမှာ ကျွန်မ စပီးတွေဝေလာတာပါပဲ.ငွေပဲဆက်ရှာရင်ကောင်းမလား.အိမ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာမှားနေပီလား.မျက်လုံးထဲမှာ ငွေစက္ကူတွေကတစ်လှည့် မေမေကတစ်လှည့် သားမျက်နှာက တစ်လှည့်နဲ့ စိတ်ညစ်နေတာပါ.။ ကိုဏီလင်းညိုရဲ့စာကိုဖတ်ပီးချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်မ ကျေနပ်စိတ်နဲ့ အတွေးတွေ လင်းရှင်းသွားပါတယ်.။ ကျွန်မအိမ်ပြန်မယ်.အဖော်မဲ့နေတဲ့ မေမေ့နားမှာ သားငယ်နဲ့အတူတူ ရေပူရေချမ်းလှမ်းရင်း မေမေ့ရဲ့ နေ၀င်ချိန် တွေကို အတူတူဖြတ်သန်းမယ်. ကျေးဇူးအထူးကိုတင်မိပါတယ်.ဆရာကိုဏီလင်းညို။